Nhau - Covid jekiseni: 'Dzinonyangarika' tsono uye dzimwe runyerekupe dzakadzvanywa
Kuburitswa kwejekiseni reCovid-19 kuUK nekuUS svondo rino kwakonzera kuwanda kwezvinyowani zvemanyepo nezvevjekiseni. Takatarisa mune mamwe akanyanya kugovaniswa.
Nhau dzeBBC Nhau dziri kupfuudzwa se "humbowo" pasocial media kuti mishonga yekudzivirira yeCovid-19 ndeyenhema, uye zviitiko zvezvenhau zvinoratidza vanhu vari kubayiwa jekiseni zvakaiswa.
Chikamu ichi, kubva mushumo wakaburitsa BBC TV vhiki ino, chiri kugoverwa nevanorwisa-vachengeti. Vanoti majekiseni ekunyepera ane "tsono dzinonyangarika" ari kushandiswa mukuyedza nezviremera kukurudzira mushonga usina.
Imwe vhezheni yakatumirwa paTwitter yakave neanopfuura zviuru makumi maviri zvetwitter uye zvavanofarira, uye hafu yemiriyoni maonero. Mumwe muparadzi mukuru wevhidhiyo akamiswa.
Izvo zvinyorwa zvinoshandisa chaiyo vhidhiyo inoratidza vashandi vehutano vachishandisa sirinji yekuchengetedza, umo tsono inodzokera mumuviri wechigadzirwa mushure mekushandisa.
Majekiseni ekuchengetedza ave achishandiswa zvakanyanya kweanopfuura makore gumi. Ivo vanochengetedza vashandi vekurapa nevarwere kubva mukukuvara uye hutachiona.
Haisi nguva yekutanga kutaurwa kwetsono dzenhema dzakabuda kubvira pakatanga kubayiwa majekiseni.
Imwe yakaratidza wezvematongerwo enyika weAustralia achimira aine jekiseni padivi poruoko rwake, tsono yakafukidzwa zvakajeka nekapu yekuchengetedza, nezvakataurwa kuti nhomba yake yeCovid-19 yakanga yabiridzirwa.
Asi muchokwadi, yakaratidza mutungamiri weQueensland Annastacia Palaszczuk achitsvaga makamera mushure mekugamuchira mushonga wefuruu muna Kubvumbi. Vhidhiyo yacho yave neinosvika mazana mana emazana ekuona pa Twitter.
Vafotori vaive vakumbira mamwe mafoto nekuti jekiseni chairo rakaitika nekukurumidza.
Hapana mukoti akafa muAlabama
Vezvehutano zvehutano muAlabama vakaburitsa chirevo vachishora "zvisirizvo" mushure menyaya yenhema yekuti mukoti akafa mushure mekutora mushonga wecoronavirus wakapararira paFacebook.
Hurumende yakanga ichangotanga kubaya jekiseni vagari vayo vekutanga.
Mushure mekuyambirwa nerunyerekupe, bazi rehutano hweveruzhinji rakabata zvipatara zvese zvinopa jekiseni mudunhu uye "vakasimbisa kuti hakuna kufa kwevanowana majekiseni. Zvinyorwa zvacho ndezvechokwadi. ”
Iyo BBC haina mutoro wezvirimo zvemasaiti ekunze.Wona yekutanga tweet pa Twitter
Nyaya yakabuda nezvakatumirwa paFacebook zvichiti mumwe wevanamukoti vekutanga - mukadzi ane makore ari makumi mana - kugashira mushonga weCovid muAlabama, akawanikwa akafa. Asi hapana humbowo izvi zvakaitika.
Mumwe mushandisi akati zvakaitika kune "tete vasahwira vake" uye akatumira meseji hurukuro dzaaiti aizochinjana neshamwari.
'Mifananidzo yetsoka yangu yakave anti-yekudzivirira mushonga'
Kwete, hazvizoshandure yako DNA - majekiseni ekudzivirira akakwenenzverwa
Iko kukuvara kunoitwa ne 'kusetsa' anti-jekiseni memes
Zvimwe zvezvakatumirwa zvekutanga nezve mukoti hazvisisiri pamhepo, asi screenshots dzichiri kugoverwa uye kutaurwa nezvadzo. Imwe yeiyi inoratidza chiitiko ichi chakaitika muguta reTuscaloosa, Alabama.
Chipatara cheguta chakatiudza wekutanga mushonga weCovid wakapihwa chete mangwanani emusi wa17 Zvita - mushure mekutaura nezveTuscaloosa kutaurwa paFacebook.
Kubva na0: 30 musi wa18 Zvita, veUS Centers for Disease Control vanoti havana kana gwaro rerufu ravakagamuchira chero munyika zvichitevera mushonga wecoronavirus.
Zvinyorwa zvacho zvakanyorwa kunzi "manyepo" paFacebook asi vamwe vanhu vanozviti vasina humbowo hwekuti "masimba aripo ave kutoedza kuzvivhara".
Vhidhiyo ye'Vanyanzvi ine yakaurayiwa yezvekunyepa
Vhidhiyo yemaminetsi makumi matatu yakaenda kunorarama sevanhu vekutanga kuUK vakagashira mushonga wePfizer Covid-19, iine huwandu hwenhema uye husina kutsigirwa hunotaura nezve denda.
Iyi firimu, inonzi "Bvunza nyanzvi", inoratidzira vakatenderedza makumi matatu vanopa kubva kunyika dzinoverengeka, kusanganisira UK, US, Belgium neSweden. Covid-19 inotsanangurwa nemumwe wevanhu ava se "hukuru hukuru munhoroondo".
Zvinotanga nezvakataurwa kuti "hapana chirwere chechokwadi chekurapa", uye kuti mushonga wecoronavirus hauna kuratidzwa kuti wakachengeteka kana kushanda nekuti "hapachina nguva yakakwana".
Zvese zvataurwa izvi hazvisi zvechokwadi.
Iyo BBC yakanyora kureba nezve chero mushonga unobvumidzwa yekushandisa kurwisa coronavirus ichave yakaedzwa zvakaomarara kuchengetedzeka uye kushanda. Ichokwadi majekiseni eCovid-19 akagadzirwa nhanho inoshamisa, asi hapana nhanho inodiwa kuona kuti chengetedzo yabvaruka.
"Musiyano chete ndewekuti mamwe ematanho akapindirana saka, semuenzaniso, chikamu chechitatu chekuyedza - apo makumi ezviuru zvevanhu vakapiwa jekiseni - rakatanga apo chikamu chechipiri, chaisanganisira mazana mashoma vanhu, chichienderera mberi," anodaro Mutori wenhau weBBC Health Rachel Schraer.
Ndingawana sei mushonga wecoronavirus?
Vamwe vatori vechikamu muvhidhiyo vanoonekwa pachiratidziri vanodzokorora izvo zvisina hwaro zvirevo.
Isu tinonzwawo zvisiri izvo dzidziso pamusoro hunyanzvi hwekuseri kwePfizer's Covid-19 jekiseni. Uye izvo, nekuda kwedenda, indasitiri yemishonga yakapihwa mvumo "yekusvetuka kuyedzwa kwemhuka… isu vanhu tichava inguruve."
Izvi manyepo. Mishonga yekudzivirira Pfizer BioNTech, Moderna neOxford / AstraZeneca dzese dzakayedzwa mumhuka pamwe nezviuru zvevanhu, vasati vatariswa kunzi vanopa marezenisi.
Vhidhiyo iyi yakaiswa papuratifomu yekutambira inozvimisikidza seimwe nzira kuYouTube, anodaro Olga Robinson, nyanzvi yekuziva nezvezvinhu kubva kuBBC Monitoring.
"Kuvimbisa kudzikisira zvine mwero, masayiti senge aya mumwedzi yapfuura ave nzvimbo yekushandisa kune avo vashandisi vakabvisa mapuratifomu makuru enhau nekuda kwekuparadzira nhema."